Red Wolf TWRP for some Xiaomi Devices – Xiaomi Guide
ZCX TWRP လိုပါပဲ။ MIUI OTA Update ကို Support ပေးတဲ့ TWRP Project တစ်ခုပါ။ သည် post မှာတော့ ကျနော်တွေ့မိတဲ့ Redmi5Plus, Mi Note 3, Mi Max2, Mi Max & Mi Max Prime, Redmi Note 4X (SD-Mido), Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 3S, 3X,3Prime, Redmi Note3Pro (SD-Kenzo) တို့အတွက် Red Wolf TWRP လေးတွေ တင်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ဆက်တွေ့တာလေးတွေရှိရင်လဲ တင်ပေးပါမယ်။ Redmi Note3Pro, Redmi Note 4X, Redmi 4X မှာ 2GB Memory devices တွေအတွက်တော့ကောင်းကောင်း support မလုပ်ပါ။
သူ့ TWRP Settings ထဲမှာ အများကြီးပါပါတယ်။ တစ်ခုချင်းသေချာနားလည်အောင်ဖတ်ပြီး သုံးကြည့်ပါ။ ADB ကို Default OFF ထားလို့ Setting ထဲမှာ မ ON မချင်း adb sideload လိုမျိုး သုံးရမှာမဟုတ်ပါ။ TWRP ကို ဝင်ချင်တိုင်း ဝင်လို့မရပါ။ Password ထားလို့ရတယ်။ မှန်မှဝင်မယ်။ အဲလို Password မှန်မှ MTP mode on မယ်။ အဲလိုမှ OTG, SD တွေ mount လုပ်လို့ရမယ်.. အခြားသော ကိုယ့်ဖုန်းကို tweak လုပ်မယ့် features တွေ… စသည်ဖြင့် ထူးခြားတဲ့ Feature လေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကလိ..သုံးကြည့်ပါ။
OTA အတွက်ကတော့ ZCX လိုပါပဲ။ TWRP သွင်းပြီး Setting ထဲမှာ ON ထား။ Full Rom zip တစ်ခါ flash ပေးထား။ အဲလိုဆို နောက်ပိုင်း OTA အဆင်ပြေပါမယ်။ ကွန်ပျူတာကနေ TWRP သွင်းလိုက်ပြီး TWRP ထဲတန်းဝင်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Boot loop မဖြစ်အောင် Lazy flasher zip မလိုပါ။ သူ့ထဲမှာ Magisk, SuperSU root တွေပါပါတယ်။ မိမိဖာသာ သတ်သတ် Up to date ဖြစ်တာ flash ပေးလဲ root အတွက် အဆင်ပြေပါမယ်။
Zip ကိုဒေါင်းပြီးရင်တော့ ဖြည်ပြီး သွင်းနည်းကို သည် Post [ –> TWRP Install & Root <– ] ထဲက အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Lazy Flasher zip တွေ flash ပေးဖို့ဆိုတာလဲမလိုအပ်ပါ။
Translated to EN, CZ, PL & RU
Lots of built-in scripts from community
Ability to activate Night mode
You can backup all partitions
Ability to activate tap to wake
Ability to set custom id for backup folder & ADB
You can flash boot logo & modem directly in the recovery
Automatic deactivation of the stock recovery
You can change the current governor on which recovery is currently running
Automatic MIUI boot image patching
Recovery can notify you about the completed backup/restore/installation using the notification diode.
Changes for security reasons
Folder with backups in internal storage can be only accessed from recovery
ADB isn’t starting automatically at the start of the recovery. You have to activate it in recovery
MTP isn’t starting until user enter correct password
Deactivated TWRP theme engine
Mi Max Prime & Mi Max ( 3/32, 3/64, 4/128 )
Mi Max ( 2/16 )
Redmi Note 4X (SD-Mido)
Redmi Note3Pro (SD-Kenzo)
MIUI Fans များစိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ… 🙂 🙂
ဘယိလိုလုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာ မပါဘူးနော်
သည်ထဲမှာ TWRP ဘယ်လိုသွင်းပါဆိုတဲ့ post ရေးထားပါတယ်.. အဲသည်အတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်.. အခု Post မှာလဲ လုပ်နည်း link ကို ထပ်ထည့်ထားလိုက်ပါမယ် 🙂
The rar file for mi max cannot be extracted.It says invalid rar.
I tested and its OK. Try from another hosting. There were be three alternative download links
Twrpအသုံးပြုပုံသိချင်ပါတယ် သွင်းပြီးပါပြီ မသုံးတက်ဖြစ်နေတာပါ
Han Min Htut
Redmi Note 5A Prime အတွက် ပေးပါအုံးဗျ
အဲသည် Model အတွက်တော့ RedWolf ထဲမှာ မတွေ့မိပါ.. အခြားသော TWRP များပဲတွေ့မိပါတယ်
LeaveaReply to Phyo wai zaw Cancel reply